Ọrụ - Shandong Runte Refrigeration Technology Co., Ltd.
Nhọrọ nke otu ngwaọrụ na-adabere ọ bụghị naanị na ọnụahịa, ọdịdị, kamakwa na ike zuru oke nke ụlọ ọrụ ahụ, ma ọ nwere ike inye ndị ahịa ọrụ zuru oke nke ọrụ, site na nhọrọ ngwaahịa, ịzụ ahịa ụlọ ahịa ịbịaru imewe, pipep design, Nrụpụta ihe owuwu ihe owuwu, ọrụ nrụnye, na ọrụ ire ere Ka ịhọrọ n'akụkụ ndị ọzọ, ezigbo onye na-eweta ngwaahịa nwere ike ibuga akụrụngwa maka ojiji ogologo ndụ, ka akụrụngwa wee rụọ ọrụ nke ọma. Na ndụ ọrụ dị ogologo na ọdịda ọdịda dị ala.
Ụlọ ọrụ anyị bụ ọkachamara na-ebubata akụrụngwa refrigeration maka azụmahịa na ụlọ ahịa. Ọ nwere ahụmahụ nke afọ 18 ma nwee ike ịnye ngwọta kachasị mma site na ire ere na-ewu na-arụ ọrụ mgbe-ahịa, ma dozie nsogbu dị iche iche ngwa ngwa o kwere mee.
● Na-akwado ngwaahịa ndị kwesịrị ekwesị na ndị ahịa ịhọrọ dịka eserese ha si dị.
● Kwado ngwaahịa dabere na ngwaahịa ịchọrọ igosipụta.
● Kwado ngwaahịa dabere na mpaghara na gburugburu gburugburu.
● Wepụta nsụgharị 3D wee lelee mmetụta ahịa pụrụ iche.
● Nye eserese nrụnye: eserese ọkpọkọ na eserese eletrik.
● Gbakọọ nkọwa nke ihe nrụnye dịka eserese.
● Nye ndị ahịa ihe dị iche iche zuru oke na vidiyo.
● Otu ọkachamara nrụnye akụrụngwa ga-aga saịtị maka nrụnye.
● A na-enye nkwado ọrụ aka elekere 24 n'ịntanetị mgbe ngwongwo rutere na saịtị.
Ngwá ọrụ ọ bụla ga-enwe nsogbu. Isi ihe bụ iji dozie nsogbu ahụ n'oge. Ụlọ ọrụ anyị nwere otu ọkachamara na-ahụ maka ịza nsogbu ọrụ ahịa mgbe ọ gasịrị. N'otu oge ahụ, e nwere ntụziaka ọkachamara na akwụkwọ ntuziaka maka ịkwado ngwá ọrụ iji nyere ndị ahịa aka na-arụ ọrụ nke ngwá ọrụ.
● Akwụkwọ ntuziaka nlekọta ọkachamara, dị mfe nghọta.
● Enwere ihe ndị kachasị mkpa maka iyi akụkụ, nke a ga-ezigara ndị ahịa ya na ngwongwo.
● Na-enye azịza ajụjụ ịntanetị awa 24.
● A na-enyocha ihe eji arụ ọrụ mgbe niile iji chetara ndị ahịa ọrụ mmezi mgbe niile.
● Soro ndị ahịa na ojiji akụrụngwa mgbe niile.
N'ihe gbasara ngwa agha na njem ụgbọ njem, ụlọ ọrụ anyị emeela ezigbo nchekwa maka ngwaahịa iji hụ na ngwaahịa ahụ rutere n'ọdụ ụgbọ mmiri ndị ahịa n'enweghị nsogbu.
1. Ụzọ ụgbọ njem logistics: oké osimiri, ala na ikuku.
2. Nye atụmatụ 3D nke ntinye ngwaahịa iji mee ka ohere dị mma na-echekwa ego mbupu.
3. Usoro nkwakọ ngwaahịa: Dabere na njirimara nke ngwaahịa ma ọ bụ ụdị njem, a na-ahazi nkwakọ ngwaahịa dị iche iche, yana usoro nkwakọ ngwaahịa dị ka osisi osisi, plywood, ihe nkiri plastik, ihe mkpuchi, wdg, iji chebe ngwaahịa ahụ pụọ na nkukota na nrụgide.
4. Mark: Ọ dị mma maka ndị ahịa ịlele ngwaahịa na ọnụọgụ, ka ha wee tinye ngwa ngwa.